gtalk မှာချက်ရင်းသီချင်းနားထောင်ရအောင် - MYSTERY ZILLION
October 2009 edited November 2009 in ဖတ်စရာ
ဒါပေမယ့်ခုကတော့ online ရေဒီယိုပါ...အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယိုလို့ခေါ်ပါတယ်..
၁။ကိုယ့်ရဲ့gtalk ကနေ[email protected] ကိုadd လိုက်ပါ..
၃။ accept ပြီးရင်အဲဒီ[email protected]ရဲ့nick ကိုဖွင့်လိုက်ပါ...link ၂ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်...အပေါ်ကlink...http://89.238.146.148/APYTZ * ကိုclick လုပ်ပါ
၄။window media ဖြစ်ဖြစ်..တစ်ခြားmedia file ဖြစ်ဖြစ်ကျလာပြီးရေဒီယိုနားဆင်လို့ရပါပြီ...
brother ပြောသလိုပဲ ဒါလေးလည်း ရှိသေးတယ်ဗျ.
[email protected] ဆိုတာကို gtlk မှာ အင်ဗိုက်လုပ်ရုံပါပဲ ............ သီချင်းများလည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် .........
ဒီလင့်လေး ချပေးပါလိမ့်မယ် ... နှိပ်လိုက်ရင်တော့ firefox (or) internet explorer တစ်ခုခု လိုပါလိမ့်မယ်
ဒီလိုမတောင်းပဲနဲ့ ကိုယ့်စက်ထဲရှိတဲ့သီချင်းတွေကို တခြားသူတွေကိုဖွင့်ပြချင်ရင်ကော လုပ်လို့ရလားမသိဘူး လုပ်လို့ရရင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲခင်ဗျား???
Orbs.7 wrote: »
အာအကိုကလဲ လွယ်ပါတယ် ဗျာ အကိုမှာ ဘောက်ရှိရင် ဘောက်ကလေးကို user တွေနားတိုးပြီးတော့
ဒီမှာတော့ ရေးထားတာတွေ့တယ်။ ကျွန်တောှတော့ စမ်းမကြည့်ဘူးပါ။
အဲ.. ကောင်းရော.. နားထောင်စေချင်တဲ့သူ နားမထောင်ရခင် ကိုယ်အရင် နားကွဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်.။ သိပ် မ မ ပါနဲ့ ဆရာသမားရဲ့...:14::14:
January 2013 edited January 2013 Registered Users
မင်္ဂလာပါအကိုတို့ရေ ကျနော့်ဖုန်း လော့ကျသွားလို့ဘယ်လိုလုပ် ရမယ်ဆိုတာ သိရင်ပြောပေးကြပါဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
January 2013 Administrators
@phyomaung , we are not allow to use zawgyi in our forum. Thanks.
For your question , you should create new question instead of asking in here because it's not related to current thread and you can't get the answer easily.